काठमाडौं । औषधि व्यवस्था लिमिडेडद्वारा उत्पादित स्यानिटाइजरको माग बढ्न थालेको छ । बजारमा पाइने विभिन्न कम्पनीले उत्पादन गरेकामा कैफियत देखिएपछि कम्पनीद्वारा उत्पादित स्यानिटाइजरको माग ह्वात्तै बढेको हो । विभागका निमित्त महानिर्देशक विजयश्री रत्न वज्राचार्यले अहिले दैनिक झण्डै रू. ३ लाख हाराहारीको स्यानिटाइजर विक्री भइरहेको जानकारी दिए ।
लिमिटेडले एलोपेथिक औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ । मुख्यगरी सिटामोल, सिटाप्लस, दुई प्रकारको जीवनजल, स्यानिटाइजर, ग्लिसिरिन, डिस्टिल्ड वाटर यहाँ उत्पादन हुन्छ । स्यानिटाइजर भने गत चैतदेखि बजारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर उत्पादन शुरू गरिएको वज्राचार्यले जानकारी दिए । चैतमा स्यानिटाइजर र मास्कको हाहाकार थियो । सरकारले कोभिड–१९ संक्रमण देखिन थालेपछि चैत ११ देखि बन्दाबन्दीको आदेश जारी गरेको थियो ।
‘हामीले बन्दाबन्दी हुनुभन्दा केही अघि नै बजारको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर उत्पादन थालेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले दैनिक २० हजार लिटरसम्म उत्पादन गर्न सक्छौं ।’
उनका अनुसार अहिले ६०, १००, २०० एमएल र आधा लिटरको बोतलमा स्यानिटाइजर उप्पादन हुँदै आएको छ । यसको औषधि व्यवस्था विभागले तोकेको बजार मूल्य ६० एमएलको रू. ७८, १०० एमएलको रू. १२५, २०० एमएलको रू. २५० र आधा लिटरको रू. ४५० रहेको छ । मागअनुसार पाँच लिटरको पनि विक्री हुँदै आएको छ । रासस